सरकारको प्राथमिकतामा नसर्ने रोग ,आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार जिल्लामै
प्रकासित मिति : २०७३ चैत्र ४, शुक्रबार प्रकासित समय : ०७:४६
काठमाडौं । सरकारले नसर्ने रोगलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । सर्ने रोगभन्दा नसर्ने रोगका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले यस्ता रोगलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । पछिल्लो समय मुटु, श्वासप्रश्वास, क्यान्सर, मधुमेहजस्ता रोगहरूले धेरै मानिसको मृत्यु भइरहेको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सरकारको प्राथमिकतामा नसर्ने रोग परेको बताएका छन् । बिहीबारदेखि राजधानीमा नसर्ने रोगबारे सुरु भएको दुईदिने तालिममा उनले नसर्ने रोगको न्यूनीकरणका लागि जनचेतना जगाउन र यस्ता रोग लागेमा स्थानीयस्तरमै स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षण गराई उपचार गराउनका लागि यो कार्यक्रम लागू गरिएको बताए । ‘
‘सरकार विगतदेखि सर्ने रोगलाई कसरी कमी गर्न सकिन्छ भन्नेमा लागेको थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नसर्ने रोगका कारण मर्नेहरूको संख्या बढ्न थालेको छ । त्यसैले नसर्ने रोगको रोकथाम र उपचारमा जोड दिइएको हो । अब आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार जिल्लाहरूबाटै हुनेछ,’ उनले भने– ।
स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले नसर्ने रोगको न्यूनीकरणका लागि सरकारले पहिलेदेखि नै लगानी गरिरहेको चर्चा गर्दै यो रोग लाग्नै नदिन रोकथाम र रोगको सुरुआतमै परीक्षण गर्ने विषयमा व्यवस्थित कार्यक्रम सुरु गरेको बताए ।
मन्त्री थापाले नसर्ने रोगबारे तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गर्न आठ जिल्लामा सेवा सुरु भएको बताए । उनले यो सेवालाई चाँडै देशैभरिका अस्पतालमा पु¥याउने लक्ष्य रहेको पनि बताए । ‘नसर्ने रोगबारे सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणसमेत जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा हुँदैन,’ मन्त्री थापाले भने–‘यसलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । पहिलो चरणमा आठ जिल्लाबाट सेवा सुरु गरेका छौँ । त्यसको सेवा हेरेर चाँडै देशभरि सेवा विस्तार गर्नेछौँ ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा सरकारले केही महिनादेखि इलाम र कैलाली जिल्लामा नसर्ने रोगबारे स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गर्दै आएको छ । दुई जिल्लाको सेवालाई मध्यनजर गरेर सरकारले आफ्नै लगानीमा आठ जिल्लामा सेवा सुरु गरेको बताएको छ । पहिलो चरणमा पाल्पा, बागलुङ, म्याग्दी, रौतहट, मकवानपुर, बर्दिया, सुर्खेत र अछाम रहेका छन् । योसँगै नसर्ने रोगको कार्यक्रम १० जिल्लामा पुगेको छ ।
चार वर्षमा ७५ जिल्लामा सेवा
सरकारले आगामी चार वर्षमा सबै जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा नसर्ने रोगबारे कार्यक्रम पु¥याउने पुनर्जागरण महाशाखाका निर्देशक डा. मोहम्मद दाउदले बताए । सरकारले सुरु गरेको १० जिल्लामा उपचार, रोकथाम, स्वास्थ्य परीक्षण, जीवनशैली परिवर्तनदेखि रगत परीक्षण, क्यान्सरको सामान्य उपचार, मुटुरोग, श्वासप्रश्वास, मधुमेहलगायतको उपचार हुनेछ ।
नसर्ने रोगबारे सरकारले थालेको अभियान सराहनीय रहेको भन्दै दाउदले यसले नसर्ने रोगका कारण मृत्यु हुनेको संख्या घटाउन सहयोग पुग्ने दाबी गरे । १० जिल्लाका पाँच सय स्वास्थ्य संस्थाबाट नागरिकहरूले नसर्ने रोगबारे स्वास्थ्य उपचार पाउने भएका छन् । ‘औपचारिक रूपमा नसर्ने रोगबारे १० जिल्लामा कार्यक्रम सुरु भएको छ । यसका लागि पहिलो चरणमा पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजनसहित बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सबै सामान स्वास्थ्य संस्थामा पठाइसकिएको छ,’ दाउदले भने– ।
आठ जिल्लाबाट सेवा सुरु
तालिममा सहभाीगहरूले जिल्लाका स्वास्थ्यचौकी र स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मीलाई यससम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘पेन’ प्याकेजमा मुटु, मधुमेह, क्यान्सर र श्वासप्रश्वासलगायतका रोग नियन्त्रण गर्ने योजना भए पनि सरकारले कैलाली र इलाममा मुटु र मधुमेहलाई मात्रै लिएर नमुना कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । यो समाचनर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा नेपाली टोमले भारतलाई जित्न सकेनः ३–० ले पराजित
माले । भारी वर्षा, पहिलो पल्ट फाइनल खेल्नुको तनाव, अनि ‘डगआउट’ मा मुख्य प्रशिक्षकको
चेपाङ समुदायमा अभावको दसैंः बालबच्चालाई खुवाउने खुशी बनाउने पिरलो
चितवन । काखमा एक वर्षकी छोरी पिठ्युमा चामलको बोरा बोकेर २२ वर्षीया सन्तकुमारी चेपाङ
विपद्‌मा सुदूरपश्चिमः बाढी तथा पहिरोले जनधनको व्यापक क्षति, बस्तीहरू डुबानमा
सुरक्षा टोली उद्धारमा खटियो
Reply on Twitter 1450703720350552066Retweet on Twitter 1450703720350552066Like on Twitter 1450703720350552066Twitter 1450703720350552066
साफ च्याम्पियनशिपमा उपविजेता बनेर फर्किएको नेपालले सुधार गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण तीन पक्ष
खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन र सेवासुविधामा ध्यान दिइनुपर्नेमा जोड
Reply on Twitter 1450698285656666118Retweet on Twitter 1450698285656666118Like on Twitter 1450698285656666118Twitter 1450698285656666118
पनडुब्बीबाट मार हानिने नयाँ बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको उत्तर कोरियाको दावी
अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच यस्तो छ, दुश्मनी बढ्नुको कारण
Reply on Twitter 1450679549906145290Retweet on Twitter 1450679549906145290Like on Twitter 1450679549906145290Twitter 1450679549906145290
क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’ को स्वास्थ्यमा समस्याः नर्भिक अस्पतालमा उपचार हुँदै
केहीदिन अस्पतालमै राख्नुपर्ने अस्पतालको भनाई
Reply on Twitter 1449726594637987841Retweet on Twitter 1449726594637987841Like on Twitter 1449726594637987841Twitter 1449726594637987841